Ahoana ny fikajiana ny isan'ny takelaka ilaina amin'ny masoandro? | Green Renewable
Tomàs Bigordà | | Angovo Solar Photovoltaic
Imbetsaka isika no mieritreritra ny mametraka panneaux solaires Amin'ny trano rehetra, dia dinihinay ny isan'ny totalinay izay tsy maintsy apetraka amin'iny toerana iny. Noho io antony io dia hiezaka izahay hanazava aminao amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity fomba mazava sy tsotra amin'ny fomba fanaovana kajy an'ity isa ity mba ho mora kokoa aminao raha mametraka azy ireo. Ity fomba ity, amin'ny lafiny iray, dia azo ampiasaina amin'ny trano sy ho an'ny karazan-trano hafa izay ilana angovo kely izay hahatratra antsika amin'ireo alàlan'ny tontolon'ny masoandro ireo.
Voalohany indrindra, tokony ho fantatrao ireo panneaux solaires azo apetraka amin'ny andiany na amin'ny mifanila. Tokony ho raisina izany, fa tsy maintsy dinihintsika koa ny angovo vokarin'ny tontolon'ny masoandro ary mifanaraka amin'izany indrindra dia afaka manisa ny totalin'ny tontolon'ny masoandro na photovoltaic ilaintsika isika.
Eny, aza adino mihitsy mifidy tontonana avo lenta, satria io karazana io dia hiteraka angovo bebe kokoa hatrany ary raha manana karazana olana ianao dia mora kokoa ho azy ireo ny mamaly dia tsy maintsy tadidinao foana izany Mariho fa manao fametrahana mandritra ny 25 taona farafaharatsiny ianao.
1 Panneaux solaires: fametrahana efa be mpampiasa amin'ny karazan-trano rehetra
2 Ny tontolon'ny masoandro dia mandray anjara amin'ny fikarakarana ny tontolo iainana sy ny zava-boary
Panneaux solaires: fametrahana efa be mpampiasa amin'ny karazan-trano rehetra
Noho izany, ny fanaovana kajy ny angovo vokarin'ny tontolon'ny masoandro mandritra ny iray andro dia tsy maintsy ampiharintsika ity paika manaraka ity. Amin'ity tranga ity, ny angovo tontonana total dia ny vokatry ny tontonana avo indrindra amin'izao fotoana izao ny fetran'ny tontonana ambony indrindra isan'ora ny tampon'ny masoandro ary amin'ny 0,9 izay coefficient amin'ny fampisehoana ny tontonana. Noho izany, ny rijan-teny dia: Etontonana = Itontonana Vtontonana HSP 0,9 [Whd]
Etsy ankilany, tsy maintsy fantarintsika ihany koa ny angovo vokarin'ny valin'ny masoandro tokana. Amin'ity tranga ity dia kajy amin'ny fomba tena tsotra ihany koa izy. Toy izao manaraka izao ny rijan-teny:
Tsy maintsy raisina fa io no angovo ateraky ny maodelin'ny masoandro tokana, fa raha ny tena mila ho fantatrao dia ny habetsaky ny angovo azo avy amin'ny fametrahan'ny masoandro iray manontolo (izay misy tontolon'ny masoandro maromaro), tsy mitovy. Raha izany dia, ny amin'izao fotoana izao dia ny vokatry ny fampifandraisana ireo modely photovoltaic mifandraika raha ny voltre kosa Izy io dia azo avy amin'ny totalin'ny voltages rehetra an'ny sampana tsirairay mifandray amin'ny andian-dahatsoratra.
Aorian'ireto rijan-teny voalaza etsy ambony ireto dia ho afaka hahafantatra amin'ny fomba iray ianao tena mora ny isan'ny takelaka masoandro ilainao na ao an-tranonao na any amin'ny trano na trano hafa.
Ary farany, aza hadino ny mandray ny refy refy refy anaovan'izy ireo, satria tena ilaina izany manome miaraka amin'ny antoka feno ny angovo angovo ananantsika amin'ny fotoana rehetra, ankoatr'izay dia azontsika ampiasaina izy io mba hamerana ny vidin'ny toekarena arakaraka ny karazana fametrahana azy.
Ny tontolon'ny masoandro dia mandray anjara amin'ny fikarakarana ny tontolo iainana sy ny zava-boary
Noho ny tombontsoa lehibe aterak'ity karazana fametrahana ity dia mihamaro ireo orinasan-trano amin'izao fotoana izao no nisafidy ny hampiasa an'io karazana fametrahana io izay tena mahasoa tokoa ny tontolo iainana sy ny planetantsika.
Raha ny marina, ny orinasan-tsary photovoltaic amin'ny masoandro dia manana antony ho afa-po aorian'ny firaketana an-tsoratra 2015, izay nahatratra 229 gigawatts (GW) ny tanjaky ny angovo fotovoltaika. Tamin'ny 2015 fotsiny dia 50 GW no napetraka, ary ny fikambanan'ny mpampiasa eropeana SolarPower Europe maminavina ny firaketana an-tsoratra 2016, izay hametrahana mihoatra ny 60 GW.
Raha tsy misy ny fampahalalana ofisialy dia maminavina izany ny tatitra amin'ny 2016 62 GW no hapetraka manerantany manana fahaiza-manao vaovao. Mampalahelo fa ho antsika ny ankamaroan'ireo fametrahana vaovao ireo dia any amin'ny tsena Aziatika. I Shina indray no ho hery manosika an'ireo fitomboan'ny fahaiza-manao ireo, satria tamin'ny tapany voalohan'ny taona dia nametraka 20 GW hery vaovao izy.
Ny vinavinan'ny SolarPower Europe dia mifanaraka amin'ireo asehon'i Ny PV Market Alliance, izay ny vinavinan'ny tsena manerantany amin'ny taona 2016 sy 2017, dia naminavina fa mihoatra ny 60 GW no hapetraka amin'ity taona ity ary mihoatra ny 70 GW amin'ny taona 2017. Amin'ireo tranga roa ireo dia tsy dia misy fanantenana loatra ny vinavinan'ny mpamantatra ny toetrandro Mercom Capital y Fikarohana GTM, maminavina 66,7 GW sy 66 GW tsirairay avy izy ireo amin'ity taona ity.
Mampalahelo fa tsy hisoratra fironana mitovy amin'izany i Eropa, fa ny mifanohitra amin'izay no izy. Na eo aza ny zava-misy fa ity faritra ity no voalohany tamin'izao tontolo izao naharesy ny sakana 100 GW an'ny fotovoltaika napetraka, miaraka amina totalina 8,2 GW an'ny photovoltaic vaovao napetraka tao amin'ny kaontinanta taloha, ny SolarPower Europe dia manantena ny hihena ny fangatahana amin'ny taona 2016 sy 2017 .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » Ahoana ny fikajiana ny isan'ny takelaka ilaina amin'ny masoandro?
CESAREO GUSTAVO QUINTOS CASTELAN dia hoy izy:
Zava-dehibe tokoa ny fampiharana an'io teknolojia io amin'ny trano efa misy sy ny tetikadin'ny trano vaovao miaraka amin'ny teknolojia akaiky toy ny filàna fototra voalohany.
Valio amin'i CESAREO GUSTAVO QUINTOS CASTELAN
Robot vaovao no miditra amin'ny reactor 1 Fukushima